Paper Box - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
Yakarasika uye Base Chipo Pepa Bhokisi neRalifornia
Yakarasika uye Base Chipo Pepa Bhokisi neNice Logo Chipo Pepa Bhokisi, kadhibhokisi bhokisi rine chifukidziro chechipo. Pepa Bhokisi neRatidzo, unogona kushandisa ese marudzi ekupedzisa kuprinda logo yako yakasarudzika. Chipo Bhokisi neLid, zvigadzirwa zvinorongedza bhokisi nevharo, mhando yepamusoro uye inopisa...
Yakanaka giredhi Craft kadhibhokisi bhokisi rine kubata
Yakanaka giredhi Craft kadhibhokisi bhokisi rine kubata Kraft kadhibhokisi bhokisi, shandisa mhando yepamusoro kraft pepa, kwete nyore kuputsa. Pepa bhokisi rakabata, kumabvazuva kutakura. Tsika kraft bhokisi, neyako yako dhizaini uye logo yakadhindwa, zvakare inogona kusarudza bhokisi chimiro. Liyang Pepa zvigadzirwa...
Yakuda kadhibhokisi bhokisi nevharo jewelry zvishongedzo
Yakuda kadhibhokisi bhokisi nevharo jewelry zvishongedzo Kadhibhokisi bhokisi rine lid, dema riri nyore kadhibhokisi bhokisi rine lid, rakasarudzika uye rinotaridzika. Bhokisi rezvishongo, zvishongo zvekuisa bhokisi, zvakanaka sechipo. Dema matte bhokisi, rakajairwa saizi uye dhizaini, dema eleather color, yakazara...
Kupisa chigadzirwa kurongedza reverse tuck bhokisi
Kupisa chigadzirwa kurongedza reverse tuck bhokisi Reverse tuck box, tsika yakadhindwa logo ine glossy lamination, inotaridzika zvakanaka. Packaging pabhokisi bhokisi, rakachipa bhokisi rekugadzirwa zvigadzirwa, zvemhando yepamusoro. Yakachipa mapepa bhokisi, yakaderera mutengo wekiredhi yekupfekedza bhokisi, sarudzo...
Hand kirimu yakagadziriswa reverse tuck bhokisi
Hand kirimu yakagadziriswa reverse tuck bhokisi Ruoko kirimu bhokisi, rakachipa asi rakakwira mhando reverse tuck bhokisi reruoko kurongedza. Yakagadziriswa chidimbu chimwe chete bhokisi, rine yakagadzirirwa logo uye dhizaini, ratidza chigadzirwa chako. Bhokisi rakachipa rine logo, rakajairwa saizi rinogona kurongedza...
Yakasarudzika kraft pepa imwe chidimbu kupeta bhokisi
Yakasarudzika kraft pepa imwe chidimbu kupeta bhokisi Kraft One Piece yekupeta Bhokisi, iri nyore kupeta uye kurongedza, sarudza yakanaka yekugadzirwa kwechigadzirwa. Kraft bhokisi pepa, shandisa mhando yepamusoro kraft pepa, yakaoma kutyora uye yakanaka giredhi. Imwe chidimbu bhokisi rine logo, rakadhindwa rakareruka...
kadiki kezvipo zvemakadhibhodhi kadhibhokisi ane lid
kadiki kezvipo zvemakadhibhodhi kadhibhokisi ane lid Chipo chechipo chebhokisi remuchato chakagadzirwa nenzira yakapetwa bhokisi: chivharo uye chigadziko bhokisi, asi rinotaridzika seremhando yepamusoro neCMYK yepamusoro kudhinda, iwe unogona zvakare kusarudza mamwe mapepa akakosha kunge pepa reparera, pepa...